Network မှထိုအကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလုပ်ငန်းခွင် Duty နမူနာ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် / Network မှထိုအကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလုပ်ငန်းခွင် Duty နမူနာ
Network မှထိုအကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလုပ်ငန်းခွင် Duty နမူနာ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 18, 2016 လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် Leave 244 views
တောင်ပေါ်က, configure, နှင့် businessis ဒေသခံဧရိယာအသိုင်းအဝိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေး (LAN), ကျယ်ပြန့်-area network (WAN), နဲ့ Web devices များသို့မဟုတ်ပင် multilevel စနစ်၏တစ်အစိတ်အပိုင်း. အားလုံးသို့မဟုတ်မည်သည့် technique ကိုစားသုံးသူများထံသို့အချို့အသိုင်းအဝိုင်းရရှိမှုအောင်စက်ဝိုင်းကိုစောင့်ရှောက်မည်နှင့်ရပ်ရွာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုထောကျပံ့ဖို့လိုအပျသော upkeep ပြီးမြောက်နိုင်. စမ်းသပ်ရန်နှင့်စစ်ဆေး web site ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတိကျစွာအလုပ်လုပ်စေရန်စေခြင်းငှါ,. multilevel မော်ဒယ်နှင့်အတူထွက်ကူညီစေခြင်းငှါ,, အကဲဖြတ်, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, နှင့်ကွန်ယက်နှင့်ဖိုင်များဆက်သွယ်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအကြားထိန်းချုပ်မှု. ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူ-ထောက်ခံမှုအထူးကုနဲ့ PC အသိုင်းအဝိုင်းအကူအညီဂုရုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါစေ. Network ကိုလုံခြုံရေးအခြေလှမ်းများမေလတွင်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြသည်.
pc ကွန်ရက်များနှင့်နည်းစနစ် software ကိုကွန်ပျူတာများအပါအဝင်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာသုတေသနအခြေအနေများသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်စီမံခန့်ခွဲ, ရည်ရွယ်ချက် software ကိုအများအပြား configurations.
စီမံကိန်း, တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်, နှင့် application စောငျ့ရှောကျဖို့ကွန်ယက်ကိုလုံခြုံရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်, ဒေတာ, နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်.
ကွန်ရက်များနှင့် PC များရဲ့ထိရောက်မှုကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ run မာစတာယူနစ်, နဲ့ PC ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အသုံးပြုမှုစုစည်းဖို့.
ပုံစံ, configure, နှင့်စာမေးပွဲကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး software နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်-system ကိုလျှောက်လွှာ.
အသိုင်းအဝိုင်း options များနှင့်အစီအစဉ်များတိုးတက်စေရန်အပြောင်းအလဲများအကြံပြု, နှင့်ဆက်စပ်-တို့အားဤသို့သောအပြောင်းအလဲများဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်းနစ်လိုအပ်ချက်တည်ထောင်ရန်.
ပြင်ဆင်ချက်ထုတ်လုပ်သောခံရဖို့ရှိသည်ရှိမရှိရှာဖွေကွန်ယက်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို Check, အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လည်းအားဖြင့်ဝင်အဖြစ်ပြုပြင်မွမ်းမံလုပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ,.
ကွန်ပျူတာ system ကိုအသုံးပြုလေ့အကျင့်ကလူ.
အမှိုက်ပုံ devices များနှင့်ကွန်ပျူတာဗီဒီယိုများ, နှင့်ပရင်တာများနှင့်လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်အမြိုးမြိုးကို install.
သိရှိနိုင်ဖို့သတင်းအချက်အလက်များအသုံးချဝယ်နှင့်ဆက်စပ်သောဖိုင်တွေကိုစုသိမ်း, ခန့်မှန်းချက်, စကားပြန်, နှင့်စနစ်နှင့်ကွန်ယက်ကိုတောင်းဆိုချက်များကိုဆနျးစစျ, နှင့်လိုအပ်ပါတယ်.
အစားထိုးသို့မဟုတ်ပြုပြင်၏အရေးပါမှုကိုရှာဖိုင်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင်း devices လုပ်ဆောင်ချက်ကို.
လုပ်. ဝယ်ယူခြင်းများပွီးမွောကျရောင်းသူနှင့်အတူကုမ္ပဏီတစ်ခုကပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ Organize.
သုံးသပ်ကြည့်ရှု, အစိတ်အပိုင်းများ troubleshoot, လြှောကျလှာ, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်နှင့်စနစ်ကဒုက္ခ, သည့်အခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်ပျက်ယွင်းနေအစိတ်အပိုင်းများအစားထိုး.
စီစဉ်, စောငျ့ရှောကျ, နှင့် trojan လုံခြုံရေး application သို့မဟုတ်အီးမေးလ်က applications များထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆက်လက်.
အစည်းအဝေးများရတဲ့နေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနည်းပညာများ, သဘောတူညီချက်ပို့စ်များကိုလေ့လာနေ, သို့မဟုတ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲလာရောက်ပူးပေါင်း, အသစ်နည်းပညာများလျှောက်ထားသို့မဟုတ်ထောက်ခံ’ ပြဋ္ဌာန်း.
မိန့်ခွန်းကုမ္ပဏီများနှင့်ဂီယာများအတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်းနှင့်ပေး, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနျဌာနခှဲကုန်သွယ်မှုများအတွက်အဖြစ်, အသံစာပို့စနစ်က.
shutdown ချကုသနည်းများနှင့်ပရိုဂရမျအသိုင်းအဝိုင်းက start-up, လုပ်ဆောင်သွားရန်, နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဒေတာကိုထိန်းသိမ်းရန်.
ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြင်ဆင်ချက်မှတ်တမ်းများနှင့်ဆက်စပ်ရာ Logs များကိုရေရှည်တည်တံ့, ကွန်ယက်ကို-functions တွေအပြင်.
Reading နားလညျမှု-သိဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်ဖိုင်တွေထဲမှာစာကြောင်းများနှင့်စာကြောင်း created.
အခြားလူများအခိုင်အမာအရာပေါ် active နားထောင်ခြင်း-ကမ်းလှမ်းပြီးပြည့်စုံသောအာရုံ, created ခံရသည့်အမှုအရာနားလည်ရန်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ရှိခြင်း, စံပြအဖြစ်မေးခွန်းများကိုတောင်းဆို, အစားမမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ရပ်မှာလမ်းပြနေထက်.
Criticalthinking-အလုပ်သမားအကြောင်းပြချက်နှင့်နည်းစနစ်များ၏အားနည်းချက်များနှင့်အားသာချက်များကိုအသိအမှတျပွုအကြောင်းရင်းများ, ကိစ္စများမှတွေ့ရှိချက်သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာ options များ.
အသစ်သောအချက်များကိုကျွမ်းကျင်သို့မဟုတ်ပညာပေးသည့်အခါညာဘက်ပြဿနာများအတွက်မဟာဗျူဟာ-ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထား teachingORinstructional နည်းစနစ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသင်ယူခြင်း.
အေဂျင်စီများကိုစစ်ဆေးခြင်း-OverseeingPEREvaluating ထိရောက်မှု, ကွဲပြားခြားနားသောရှေးရှေး, သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်မှုဖန်တီးသို့မဟုတ်ကုစားအရေးယူစဉ်းစားရန်.
လူမှုရေးအမြင်-သိ othersI တုံ့ပြန်မှုနှင့်နားလည်မှုသူတို့ကိုတုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးအဖြစ်.
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. control-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ’ ခြေလှမ်းများ.
အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-Creating သို့မဟုတ် function ကို user ကလိုအပ်ချက်များပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာ align လုပ်ဖို့.
ဂီယာရွေးချယ်ရေး-ဖော်ထုတ်ခြင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ် tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးအစား.
အရစ်ကျ-ထည့်သွင်းခြင်း devices များ, ထုတ်ကုန်, cabling, ယေဘုယျအားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ် applications များ.
အတော်ကြာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး-ထုတ်လုပ်ကွန်ပျူတာ applications များ.
စစ်ဆင်ရေးခြေရာကောက်-လေ့လာခြင်းကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းကိန်း, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ကိရိယာမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်စေရန်.
ကမဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လို run နေနှင့်ရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ကြောင်းဆက်ကြောင်း၏ troubleshooting-ကိုစူးစမ်းအကြောင်းတရားများ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးစာမေးပွဲ-ကွပ်မျက်စာမေးပွဲနှင့်ထုတ်ကုန်များစစ်ဆေးခြင်းများ, ပံ့ပိုးပေး, သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များထိရောက်မှုမှန်းသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မှ.
systems program တစ်ခုအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးများတွင်လမ်းကိုပြောင်းလဲ, အခြေအနေများ, နှင့် setting ကိုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဦးမည်.
ကုန်ပစ္စည်းနည်းလမ်-Discover ၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများများ၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုကိုမှရယူ, ပစ္စည်းကရိယာ, နှင့်ထုတ်ကုန်တိကျတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
ဝန်ထမ်းများအရင်းအမြစ်များ-အဆောက်အအုံ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွန်းအားပေး, သူတို့အလုပ်လုပ်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်များလမ်းညွှန်, ကြောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများအတွက်အထိရောက်ဆုံးတစ်ဦးချင်းစီဆုံးဖြတ်.
တွဲဘက်ရဲ့အဆင့် (သို့မဟုတ်နောက်ထပ် 2-နှစ်အဆငျ့)
ထက်ပိုပြီး 1 ခုနှစ်, အထိ 24 လနှင့်အပါအဝင်,
အောင်မြင်မှုများ / လုပ်ငန်း – 93.10%
ဇှဲကောငျးခွငျး – 93.36%
စီမံကိန်း – 95.01%
ထိန်းချုပ်ရေး – 75.13%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 93.80%
အခြားသူများများအတွက်ပြဿနာ – 88.74%
လူမှုနေရာချထားခြင်း – 80.38%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 88.40%
ဖိအားစာနာထောက်ထားရေး – 93.74%
ဘက်စုံ / လွတ်မြောက်ရေး – 92.80%
မှီခို – 94.00%
ရှုထောင့်မှအာရုံစူးစိုက်မှု – 93.40%
သမာဓိရှိခွငျး – 90.80%
လွတ်လပ်ရေး – 75.81%
တီထွင်ဖန်တီးမှု – 87.66%
စဉ်းစား – 92.40%
ပြည့်စုံဘို့လေ့လာမှုဘတ်ဂျက်ခန့်မှန်းချက်, ဟုတ်မှန်ရေး, နှင့်ထိန်းလိုက်နာအပ်သောနည်းစနစ်များနှင့်ကန့်သတ်သုံးပြီး. Evaluate budgeting and …